ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: စစ်တပ်က စီးပွားရေး မလုပ်သင့်ကြောင်း လွှတ်တော်တွင် တင်ပြဆွေးနွေး
We all need to spoil military shadow,but it's very diffical cause armies still on the rules.
U Than Shwe.
I know You rely ona(Ganbiya) monk and I knowing about You and your monk.Don't you scare your your other site life?
Be careful you are getting old and nearly die.
TAXI ဆွဲပြီး မိသားစု ဝမ်းရေးဖြေ ရှင်းနေရတဲ့ သူတွေ အများကြီးပါ။
သားသမီးတွေကို အဝေးသင်နဲ့ဘွဲ့ရအောင် ပဲ ထားရတယ်။
စစ်သားတွေ ဟာ တောထဲတောင်ထဲမှာ တိုက်ပွဲဝင်ရင်း နဲ့ ရဲဘော်အချင်း
ချင်း ဟန်ူးကောအံ ဖုံးကလေးနဲ့ ပလပ်စတစ်မြေခင်းပေါ်မှထမင်းစုစား
နောက်တော့ ငွေကျည်ဆံ တွေနဲ့ အပစ် ခံ ရတဲ့ အခါ စိတ်ဝမ်းကွဲ ကုန်
နယ်ဖက်တွေမှာ Army အသွင်ပြောင်း တွေရဲ့ မဆင်မခြင်မနေတတ်မထိုင်
တတ်မှုတွေကြောင့် ပြည်သူတွေရဲ့ အမြင်မကြည်လင်မှုတွေ ဖြစ်တာပါ
စစ်ကိုင်းခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုးဦးမြင့်ဝေဟာ DSA 27 ကပါ ဒုတပ်ရင်းမှု့းကနေ
ရာထူးလျောပြီး DC နဲ့နယ်ဖက်ပြောင်းတာ တနှစ်မပြည့်သေးဘူးကားသစ်
တစီး ဝယ်ပြီးပြီ စီစစ်သင့်ပါတယ် ဂရန်တွေပေးတာ မှန်ရဲ့လား?